Faahfaahino Laga Helayo American Lagu Qarxiyay Deegaanka Bariire. – Calamada.com
Faahfaahino Laga Helayo American Lagu Qarxiyay Deegaanka Bariire.
Iyadoo aroornimadii hore ee saaka si qarsoodi ah deegaanka Bariire ee duleedka degmada Afgooye ay kusoo gaareen askar isugu jirta American iyo Afrikaan ayaa waxaa isasoo taraya khasaaraha gaaladaasi lagu gaarsiiyay qaraxyo lagula beegsaday deegaankaasi.
Qaraxa kowaad waxa uu ka dhacay bar Controol oo laga gela deegaanka Bariire’waxaa qaraxaasi loo adeegsaday miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago.
Miinada ayaa gabi ahaan burburisay gaari Taw ah oo ay la socdeen saraakiil iyo askar American ah kuwaasi oo la xaqiijiyay iney ku halaagsameen qaraxaasi.
Qaraxa labaad ayaa ka dhacay bartamaha deegaanka Bariire kaasi oo lala beegsaday askar ka tirsan Kufaarta Afrikaanta iyo maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka kuwaasi oo dhac ka geysanayay deegaankaasi.
Kolanyadii ka koobneed American iyo Afrikan ee weerarka kusoo qaaday deegaanka Bariire ayaa gabi ahaan barqo nimadii maanta isaga cararay deegaanka iyagoo wata meydad iyo dhaawacyo isugu jirta American iyo Afrikan.
Deegaanka Bariire waxaa imika ku suagn oo maamulaya ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Halkan Ka Dhageyso Qaraxyada Bariire.
Next: Sawiro Machadka Qurdubah Oo Farac Ka Furtay Magaalada Galhareeri.